के तपाईको कपाललाई नियमित कैंचीले काट्नु ठीक छ? - जापान कैंची
के तपाईको कपाललाई नियमित कैंचीले काट्नु ठीक छ?
२०२० पछि, अधिक र अधिक व्यक्तिहरू "कसरी सामान्य कौंजरले मेरो कपाल काट्ने?" खोज्दैछन्, तर के तपाई नियमित कौंसरले कपाल काट्ने कुरामा होशियार हुनुपर्छ?
नियमित कैंचीले तपाईंको कपाल काट्नु अत्यन्तै लोभ्याउने छ, तर यसले तपाईंको कपाललाई नोक्सान पुर्‍याउँछ? के हुन्छ जब तपाईं नियमित कैंचीले कपाल काट्नु हुन्छ।
गत्ता, कपडा वा अन्य सामग्रीलाई काटिदिनको लागि बनाइएका नियमित क्यान्सरहरूमा कपाल काट्नको लागि कुनै नराम्रो सेरेटेड ब्लेड हुँदैन।
कागजको माध्यमबाट सफा तरीकाले काट्ने नियमित घरको कात्ती हुने भनेको कपाल काट्ने कैंची जस्तो छैन जुन सजीलो काट्छ वा पातलो कपाल।
नियमित कैंची प्रयोग गर्दा टग, तान्ने, क्षति हुने र कपाल काट्ने क्रममा विभाजन टु .्गिने छ। यो कपाल काट्ने शैलीको साथ तपाईंको कपाल मार्फत कपाल तान्नेछ र प्रहार गर्दछ।
यसले मेरो कपाल कत्तिको काट्छ त्यसले फरक पार्छ? यो वास्तवमै गर्छ यदि तपाईं कपाल काट्न चाहानुहुन्छ, तपाईंमा गर्व हुन सक्छ।
तपाईको कपाल काट्नको लागि तपाईं कती कैंची प्रयोग गर्नुहुन्छ? मेरो कपाल काट्न भान्छाको कैंची प्रयोग गर्ने बारेमा के भन्न सकिन्छ? ब्रायन्ट भन्छन् कि ब्रायन्टको जवाफ प्राय जसो केसहरूमा हुँदैन। कैंची सबैभन्दा ठूलो भिन्नता हो। भान्छाको सिंचीमा फराकिलो ब्लेड हुन्छ, त्यसैले सटीक कटौती गर्न अझ गाह्रो हुन्छ।
सामान्य कैंचीले कपाल काट्ने
कपाल काट्ने उपकरणहरू कपाल काट्नको लागि बनाईन्छ। ब्लेड को किनारा एक महीना र पातलो तीक्षो धार छ कि निर्बाध उनको माध्यम बाट काट्छ।
उत्कृष्ट किनाराहरू के केशविन्यास र नाई कपाल उत्तम कपाल काट्ने उपकरण बनाउँछ।
नियमित कैंची कडा वस्तुहरूको माध्यम बाट काटने को लागी brute ताकतको लागि बनाईन्छ। यसले क्षति गर्दछ, च्याप गर्दछ र कपाल तान्दछ।
कपाल काट्ने क्यान्सरले मख्खनजस्तो कपाल मार्फत स्लाइस गर्न सुन्दर तेज ब्लेड प्रयोग गर्दछ।
सामान्य कैंची के हुन्?
सामान्य क्यान्सरले उपकरणहरू काटिरहेको छ कपालको लागि डिजाइन गरिएको छैन, र त्यसले तपाईंको कपालको अन्तमा स्थायी क्षति निम्त्याउँछ। सामान्य कैंची समावेश:
भान्साको सिंची: यो काट्न र हेरिनको लागि डिजाइन गरिएको हो
कपडा कैंची: यी स्लाइस गर्नका लागि र डिजाइन गरिएको हो
नेल वा भौं कैंची: यी साना कपाल स्ट्रैंडहरू काट्न डिजाइन गरिएको हो
सुस्त कैंची: यो tug र तपाईंको कपाल मा खींच्न हुनेछ
नियमित दैनिक कैंची सामान्यतया बाक्लो ब्लेडको साथ बनेको हुन्छ टग, तान्न र फाल्नको लागि।
यदि तपाईं घरको कपाल काट्नेको लागि यी सामान्य क्यान्सरहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं बिग्रिएको आशा गर्न सक्नुहुन्छ, र विभाजित कपाल समाप्त हुन्छ।
धेरै क्षति देखा पर्न २ देखि hair कपाल धुन्छ, र तपाईं एक हेयरड्रेसर वा नाई जानु पर्छ क्षति समाधान गर्न।
कपाल कैंची र नियमित कैंची बीच के फरक छ?
तपाइँ नियमित कात्रीको साथ तपाइँको कपाल काट्न सक्नुहुन्छ, तर तपाइँ यसलाई पछुताउन सक्नुहुन्छ। कपाल कैंची र नियमित कैंची बीचको महत्वपूर्ण भिन्नता इस्पात र ब्लेड हो।
नियमित कैंची सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएको इस्पात असभ्य छ र तपाईंको कपालको लागि मैत्री छैन। उही समयमा, कपालको क्यान्सरमा स्टील कडा छ र एक धार ब्लेड हो।
नियमित कैंचीमा प्रयोग गरिएको ब्लेड आँसु र पुलहरू। यसको तुलनामा, कपालको क्यान्सरको किनारा अल्ट्रा-तीखो हुन्छ जसले तपाईलाई कपालमा काट्न सजिलो बनाउँदछ सजिलै क्षति नगरीकन।
तपाईं नियमित कैंची प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यदि तिनीहरू पर्याप्त छिटो छ, तर धेरै जसो छैनन्। नियमित कैंचीले तपाईंको कपाल छाँटकाँट गर्नुको सट्टामा मुड्दछ, र कति कपालमा तपाईं छाँटकाँट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ; यो सुस्त कैंचीको कारण केहि समय लिन सक्दछ।
हामी कपालबाट कपालको सस्तो विशेषज्ञ जोडी सुझाव दिन्छौं Mina or Jaguar उनीहरूको मूल्य निर्धारण लचिलो छ। यो उचित छ, कुनै समस्याको बावजूद एक जोडी कैंचीको लागि अलि अतिरिक्त खर्च गर्न जुन तपाईंको कपाललाई नोक्सान पुर्‍याउँदैन।
असाधारण धारि कैंचीको साथ कपाल छाँटकाँट गर्नु भन्दा राम्रो अरू केही छैन, त्यसैले सावधान हुनुहोस्; तिनीहरू रेजर जत्तिकै तीखा छन्।
के यो साँच्चै फरक छ यदि मैले मेरा बच्चाहरूको कपाल काट्न नियमित कैंची प्रयोग गर्छु?
यदि तपाईं धेरै आमाहरू जस्तै हुनुहुन्छ जसले कोविडको कारण आफ्ना बच्चाहरूको कपाल काट्ने सहारा लिनुभएको छ, हामी तपाईंलाई सलाम गर्छौं! तर, यदि तपाइँ उनीहरूको कपाल काट्न जारी राख्न जाँदै हुनुहुन्छ र उनीहरूको कपाल जोगाउन र उनीहरूलाई व्यावसायिक देखिने कटौती दिन चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ वास्तवमै उच्च गुणस्तरको कपाल काट्ने कातरहरूमा लगानी गर्न आवश्यक छ।
तपाईले बाहिर जानु पर्दैन र सयौं डलर खर्च गर्नु पर्दैन, तर तपाईले उच्च-गुणस्तरको कातरको एक जोडी प्राप्त गर्न आवश्यक छ र सही तरिकामा उनीहरूको हेरचाह गर्न आवश्यक छ।
किनभने कपाल काट्ने कैंचीहरू कपाल छिटो र ठीकसँग काट्न डिजाइन गरिएको हो। तिनीहरू तीखो कटौती गर्न बनाइएका छन्। जब तपाईं सुस्त कैंची, नियमित घर कैंची, वा भान्सा कैंची प्रयोग गर्नुहुन्छ, तिनीहरूले यसलाई ठीकसँग काट्नुको सट्टा टग, क्षति गर्न र भाँच्न सक्छन्। यसले क्षतिग्रस्त अन्त्य र ब्रेक निम्त्याउन सक्छ।
त्यसोभए, हामीले कुन कैंची प्रयोग गर्नु हुँदैन?
सबै कैंचीहरू जबसम्म तिनीहरू विशेष रूपमा कपाल काट्न डिजाइन गरिएका छैनन्। त्यसोभए, यसमा भान्साको कैंची, कपडाको कैंची, नेल वा आइब्रो कैंची र तपाईंले घर वरपर फेला पार्नुहुने अन्य कैंचीहरू समावेश छन्।
जब तपाइँ कपाल काट्ने कैंचीको राम्रो जोडी किन्न निर्णय गर्नुहुन्छ यो केवल कपाल काट्नको लागि मात्र प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ र अरू केहि छैन। कागज वा कपडा काट्न आफ्नो कातर प्रयोग नगर्नुहोस् किनकि यसले ब्लेडलाई सुस्त बनाउन सक्छ र उस्तै परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ ... सुस्त ब्लेडका कारण कपाल बिग्रन्छ।
त्यसोभए, तपाइँ कपाल काट्ने कातरहरूको कसरी हेरचाह गर्नुहुन्छ?
यदि तपाइँ कपाल काट्ने कैंचीको राम्रो जोडी खरिद गर्दै हुनुहुन्छ ताकि तपाइँ घरबाट तपाइँका बच्चाहरूको कपाल काट्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ तिनीहरूलाई एक पेशेवर जस्तै व्यवहार गर्न चाहनुहुन्छ। किन? किनभने अन्यथा तिनीहरू सुस्त हुनेछन् र तिनीहरूले उस्तै काट्ने छैनन्।
एक सुपर तीखो ब्लेड कायम राख्न को लागी, तपाइँ प्राय: तपाइँको कैंची मेटाउन सुनिश्चित गर्न चाहानुहुन्छ। जब तपाइँ आफ्नो बच्चाको कपाल काट्दै हुनुहुन्छ, ब्लेडबाट कपाल पुछ्नुहोस् ताकि यो बन्न नपरोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि जब तपाइँ कैंची धुनुहुन्छ, तपाइँ तिनीहरूलाई केसमा राख्नु अघि तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा सुकाउनुहोस्।
सधैं आफ्नो कैंचीलाई अतिरिक्त हेरचाहका साथ ह्यान्डल गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई तपाईंको शौचालयको झोलामा फाल्नुको सट्टा बिस्तारै सेट गर्नुहोस्। ब्लेडहरू जोगाउन र तिनीहरूलाई सफा र तेल राख्नको लागि आफ्नो कैंचीको लागि मात्र छुट्टै केस राख्न निश्चित गर्नुहोस्। जब तपाइँ तिनीहरूलाई नियमित रूपमा तेल गर्नुहुन्छ यसले तिनीहरूलाई छिटो र सहज रूपमा काट्नेछ।
यदि तपाईं आफ्नो बच्चाको कपाल घरबाट काट्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं पूर्ण रूपमा सक्नुहुन्छ! केवल सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो बच्चाको कपालको अखण्डता जोगाउन र टुक्रा टुक्रा वा क्षति हुनबाट जोगाउन सही कैंची पाउनुभयो। कैंची सफा राख्नुहोस् र उत्तम कट सुनिश्चित गर्न ब्लेडको ख्याल राख्नुहोस्।
कैंचीको गुणस्तरमा ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ ताकि तपाइँ सबैभन्दा सटीक र ब्लन्ट कटौती दिन सक्नुहुन्छ। कम गुणस्तर वा सुस्त कैंचीले कपाललाई अझ बढी क्षति पुर्याउँछ र टुक्रा टुक्रा पार्छ। यदि तपाइँ एक पेशेवर हुनुहुन्न भने, उच्च गुणस्तरको कपाल काट्ने कैंची हरेक कटको लागि आवश्यक छ।
निष्कर्ष: के तपाइँ नियमित वा सामान्य कैंचीको साथ तपाइँको कपाल काट्नु ठीक छ?
हामी सबैसँग नियमित क्यान्सरको जोडी छ जुन हामीले एक पटक हाम्रो ब्या bang्ग काट्न प्रयोग गर्‍यौं, तर के हुन्छ यदि तपाईंले नियमित कात्तीले कपाल काट्नु भयो भने के हुन्छ?
नियमित कैंची र हेयरड्रेसि sc कैंची बीचमा केहि मुख्य भिन्नताहरू छन्। कपाल काट्नुको लागि हेयरड्रेसि sc कैंचीमा ब्लेड धारिलो हुन्छ, र नियमित कैंचीमा ब्लेड जबरजस्ती काटनेको लागि ब्लन्ट गर्दछ।
त्यसोभए के हुन्छ यदि तपाईंले नियमित कौंसरको साथ आफ्नो कपाल काट्नु भयो भने?
नियमित कैंचीले तपाईको कपाललाई झार्दै र प्रत्येक स्ट्रानलाई तानेर क्षति पुर्‍याउँछ। सब भन्दा सामान्य बताउने संकेत यो छ कि कसैले कपाल नियमित कात्रीको साथ आफ्नो कपाल काट्छ विभाजन समाप्त हुन्छ।
नियमित कैंचीको ब्लन्ट ब्रूट बलले तपाईंको कपाललाई नराम्रोसँग काट्छ, जस्तै कागजको माध्यमबाट दुई ढुocks्गा प्रयोग गर्न।
कपाल कपाल र नाईको कैंचीले टुक्राका लागि राम्रो चीज ब्लेड प्रयोग गर्दछ। बचेको मासुको मासु काटेर शेफको चक्कु जस्तै, पेशेवर हेयरड्रेसि sc कैंची कवच ​​को ट्रेस बिना छोड्नेछ।
नियमित कैंचीसँग फर्मर ग्रिपलाई अनुमति दिन ठूलो ह्यान्डलहरू हुन्छन्। कपालका कैंचीहरू नियमित कैंचीभन्दा फरक हुन्छन किनकि तिनीहरूको हल्का पकडको कारण उनीहरूसँग सानो, बढी सुरुचिपूर्ण ह्यान्डल हुन्छ।
यदि तपाईं आफ्नो कपाल काट्नको लागि नियमित कैंची प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो कपाललाई नोक्सान गर्नुहुनेछ, यसलाई विभाजन-छोराहरू र असमान ब्यालेन्सको साथ छोड्दै।
यदि तपाईं नियमित कैंचीले कपाल काट्नु भयो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ?
एक पेशेवर कपाल वा नाईले तपाईंलाई भन्नेछ कि तिनीहरूलाई छोटो काट्नु आवश्यक छ। नियमित कात्रीको साथ तपाईंको कपाल काट्नु अपूरणीय क्षति निम्त्याउँछ, र यसलाई ठीक पार्ने एक मात्र तरिका यसलाई अधिक संक्षिप्त काट्नु हो।
चाहे तपाई भौं काँछा, भान्छाको कपाल, कपडाको कैंची, नेल क्लिपर वा केवल कपाल काट्ने कात्रो प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं विभाजन-छोराहरू सिर्जना गर्नुहुनेछ, असमान सन्तुलन र अपूरणीय क्षति।
नियमित कुंद कैंचीबाट कपालमा सबैभन्दा सामान्य क्षति टगिंग र पुलिंगले हुन्छ। यसले धेरै चोट पुर्‍याउँछ र तपाईको कपाल बिग्रिएको मर्मतको बाहिर जान्छ।
नियमित कैंचीले असभ्य, कुटिल ब्लेड प्रयोग गर्दछ जुन तपाईंको कपाललाई प्रहार, टग र पुल गर्दछ। तपाईको कपाल काट्नको लागि किचनको बटरको चक्कु लिनु बराबर हो।
हामी कडा सिफारिश गर्दछौं घर मा नियमित कैंची प्रयोग गर्न को लागी तपाइँको कपाल को लागी कपडा, कुंद, भान्छा वा भौं कैंची सहित।